DJ KHALED သည် BIG ORANGE ၌ပြီးခဲ့သည့်ညကဖျော်ဖြေခဲ့သည် - နှုန်းထားများ
DJ Khaled သည် Big Orange ၌ပြီးခဲ့သည့်ညကဖျော်ဖြေခဲ့သည်
RUB Entertainment သည်၎င်း၏တတိယမြောက် Big Orange Festival ကိုမတ်လ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၆ တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်ဖြင့်ပြုလုပ်နေသည်။ လူရွှင်တော်ဘိုဘန်းဟမ်သည်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောစကားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် DJ Khaled ၏စွမ်းဆောင်ချက်သည်ညလုံးပေါက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
တံခါးများပွင့်လာသည်နှင့်အမျှရာနှင့်ချီသောကျောင်းသားများသည်ဂီတဆောင်သူနှင့် Snapchat အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများကိုတစေ့တစောင်းကြည့်ဖို့တန်းစီခဲ့ကြသည်။ပရိသတ်များသော့၏ပိုစတာများနှင့် Khaled ၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောစကားများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်အတူရောက်လာသည် - Khaled တစ်ညလုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာ anotha 'သို့မဟုတ်အခြားလား? ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ?
WE KHALED ချင်! WE KHALED ချင်! အဆိုပါ Reitz Rion Ballroom ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်နာရီကြာနှောင့်နှေးနေခဲ့ပေမယ့် Khaled အဆောက်အ ဦး သို့အထဲသို့ဝင်။ တခါပရိသတ်ကို #fanlove ပြသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းသားအလီ Unger-Fink ကပြောကြားသည်မှာ UF ကျောင်းသားများသည်ဂီတစွမ်းရည်ရှိသော၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသူတစ် ဦး ဦး အားမြင်တွေ့ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ဤအရာသည်အဘယ့်ကြောင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပုံရကြောင်းသင်သိလိုပါက DJ Khaled သည် ၄ ​​င်း၏ Snapchat ပုံပြင်ကိုတင်ခဲ့သည် (ဘယ်မှညာသို့: Leah Harmon, Mariela Cabrera, Madison Parks, Ali Unger-Fink, Taylor Hopper)
Khaled ရဲ့ ၀ မ်းသာစရာကောင်းတာက ၀ င်းပြောသူများမှတဆင့်မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ ညတစ်ညလုံးတွင်ကျောင်းသားများသည် DJ ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဆီသို့သူတို့၏စိတ်နှလုံးများကိုသီဆိုခြင်းနှင့်သီဆိုခဲ့ကြသည်။ အသံစနစ်တွင်ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားသောအခါညသည်လုံးဝချောချောမွေ့မွေ့မသွားခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, ဖျော်ဖြေသူကသူတို့အသံကမှန်ချင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမှန်ကန်စေပါစေ, ကမှတဆင့် powered!
ဂီတအပြင်၊ Snapchat သည်လည်းစိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မနိုင်လျှင် meme သင်မနိုင်
ဒီတော့ အဲဒါပါပဲ သူဖျော်ဖြေမယ့်အခါအဘယ်သူသည်ဤဗီဒီယိုများကြာပါသည်
Khaled ဟာသူ့နောက်လိုက်တွေကိုသူတို့လိုချင်တာကိုကြိုးစားလုပ်ဖို့၊ မေ့သွားဖို့နဲ့သူနဲ့အတူပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ခရီးကိုသွားဖို့ပြောဖို့လူသိများတယ်။ အချို့သောကျောင်းသားများသည်သူတို့ဘ ၀ ၌မည်သည့်နေရာသို့မဆိုယုံကြည်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း Khaled သည်ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်အားကျွန်ုပ်တို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းသိစေခဲ့သည်။
တနင်္ဂနွေ၏ဖောင်းပွကွယ်လွန်နှင့်ကျောင်း၏ drudgery န်းကျင်လာအဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးနှင့် Khaled ရဲ့စကားသတိရ: ဒီတော့ငါ y'all ကျောင်းတွင် y'all အကြောင်းမရှိ '' ဂုဏ်ယူ။ ငါခက်ခဲသည်ကိုငါသိသော်လည်းဘုရားသခင်သည်ကောင်း၏။ သင်ခက်ခဲသည်ဟုထင်သည့်အချိန်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သတိရစေပါ။ #blessup